कमाउन गएको छोरो काठको बाकसमा फर्कियो ! अमेरिका सेनामा कार्यरत एक : गोर्खालिको मृ:त्यु ! « गोर्खाली खबर डटकम
अमेरिकी सेनामा कार्यरत गोरखाका एक युवकको गएराती कार दु,र्घटनामा मृत्यु भएको छ । श,हीदलखन गाउँपालिका- ८ छापथोक घर भई बिगत तीनर्षदेखि अमेरिकी सेनामा कार्यरत २३ वर्षीय सुरेश श्रेष्ठको राती करिब १० बजे मृत्यु भएको परिवार श्रोतले जानकारी दिएको छ । उनी सवार २०२० टोयोटा कोरोला साउथ अन आई ३५ कारलाई नोबल काउण्टी ओक्लाहोमा राजमार्गमा अर्को सवारिले ठ,क्कर दिएको थियो ।
टा,उको र शरीर भित्र ग,म्भीर चो,ट लागेका उनलाई सेण्ट मेरिज रिजनल मेडिकलमा उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएको मृतकका आफन्त राजेश श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ विगत पाँच वर्ष अघि अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए । सैनिक तालिम पूरा गरी तीन वर्षअघि घरमा आएर फर्किएका थिए ।
अविवाहित श्रेष्ठको परिवारमा हजुरआमा, बुबा, आमा, एक दिदी र एउटा भाइ छन्। निश्चय पनि लाउलाउ खाउखाउ भन्ने उमेरमै यसरी बितिजानु निकै द,र्दनाक पुर्ण पक्कै पनि हो । तर स्वदेशमा बसेर आफ्नो जिबिको पार्जन समेत गर्न धाउधाउ पर्ने हुदा बिदेश पलायन हुनु रहर नभई बाध्यता समेत भएको कुरो कसैले नकार्न सक्दैन् । मृ,त आत्माको चिर शान्तिसहित सोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना ,हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।